Ny jeneraly Ramakavelo Désiré : “Famerenana ny fifampitokisan’ny mpitondra sy ny vahoaka ny fampihavanana” | NewsMada
Ahoana ihany ny amin’ny fampihavanam-pirenena? Maneho ny fijeriny ny mpandalina tantara sady minisitry ny Fiarovam-pirenena teo aloha, ny jeneraly Ramakavelo Désiré: “Tsotra ny hoe fampihavanam-pirenena: famerenana ny fifampitokisana eo amin’ny mpitondra sy ny vahoaka entina.” Dinidinika…
Gazety Taratra (*): Ahoana ny fijerinao ny toe-draharaham-pirenena ankehitriny sy ny fitondrana HVM amin’izao fotoana izao?
Jeneraly Ramakavelo Désiré (-): Amin’ny maha mpandalina tantara ahy: tsy maintsy mijery ny lasa, hanazavana ny ankehitriny, hibanjinana ny ho avy. Raha ny fitondrana, mbola ny zarazarao hanjakana eo amin’ny tantara ihany io.
Matoa tsy mahazo famatsiam-bola araka ny tokony ho izy isika, Merina no mitondra. Tsy mahamanetra ny milaza an’izany. Mbola tsy maintsy avy any an’indrantany ny praiminisitra. Politikan’ny Frantsay, misintona ny tady…
Tsy takatry ny mpanao politika malagasy foana ve izany? Ny antony, tsy mandalina ny tantaran’i Madagasikara. Fa tsy hoe tsy atokisany isika, satria izao na izatsy. Tsy hatoky izy, raha mbola io politikan’ny zarazarao hanjakana io.
* Inona izany no tokony hatao eo anatrehan’izany?
– Tsy maintsy miezaka ny Malagasy, miray hina. Tsotra ny hoe fampihavanam-pirenena: famerenana ny fifampitokisana eo amin’ny mpitondra sy ny vahoaka entina. Tsy mijery tavan’olona aho amin’izany.
Matoa tsy misy ny fifampatokisana, tia tena izay mpitondra eo: manao ampihimamba ny harena, manao baranahiny mivarotra ambongadiny an’i Madagasikara. Tsy miteny aho ny fitondrana amin’izao fotoana izao fotsiny, fa izay nifandimby teo.
Tany manankarena niangaran’Andriamanitra i Madagasikara. Maninona mahantra ny vahoaka? Antony azo anazavana azy koa: tsy vitan’ny hoe politika zarazarao hanjakana ataon’ny Frantsay, fa avy aty amintsika Malagasy indrindra koa.
* Inona izay hoe avy amintsika Malagasy ihany izay mampahantra antsika izay?
– Ny olona tena niomana hitondra firenena, ny antoko politika: ny AKFM, izay misy ny hoe “Tarabao maraina”, ohatra. Mbola kely dia volavolaina amin’izay lafiny izay… Eo koa ny MFM, ny Monima, ny Vonjy iray tsy mivaky. Tsy mbola nisy mpitondra ange ireo, na iray aza.
Fa iza no tonga eo amin’ny fitondrana? Olona nitsimotsimoka fotsiny avy any. Izany hoe efa tonga eo amin’ny toerana izy vao manangana antoko: PSD, Arema, UNDD, Tim, TGV, HVM. Inona no mahatonga an’izay? Olona tsy miomana, fa manam-bola dia… Afa-tsy ny tamin’ny Repoblika voalohany.
* Inona no hatao amin’izay fomba fanaovana politika izay?
– Mila ovaina ny lalàna mifehy ny fanaovana politika. Tsy azo raisina ho antoko politika, raha tsy manana sakelika (section) isaky ny faritra na distrika manerana ny Nosy. Rehefa mahahenika an’i Madagasikara, maharesy lahatra: tsy mila mizara vola na manarama mpanakanto amin’ny fampielezan-kevitra. Olona efa resy lahatra nandritra ny taona maro ny any, manana firehan-kevitra sy fandaharanasa, tsy maka ny “mpamadika palitao” isaky ny mihetsika…
Raha manangana antoko politika ka manana sakelika ifotony, rehefa tonga eo amin’ny fitondrana: efa fantatra ny atao minisitry izao na izatsy, ary efa voavolavola amin’izany izy ireo.
Fa tsy hoe tonga eo amin’ny fitondrana vao manangana antoko sy miantso an’itsy sy iroa. Tsy mampandeha ity firenentsika ity izay. Olona tsy mitovy fijery sy loko, atambatambatra toy ny bemiray fotsiny. Inona no mahagaga raha misavoritaka? Tombontsoany no tadiaviny ao…
*Ahoana ny amin’ny lalàmpanorenana saika ifandroritana hatrany na tsy hajaina?
– Efa 200 taona mahery ny lalàmpanorenan’i Etazonia, ohatra; ny an’i Soisa, 700 taona mahery… Maninona miova isaky ny dimy taona ny an’i Madagasikara, raha raisina ny fanitsiana ny lalàmpanorenana?
50 taona ny nahazoana ny Fahaleovantena. Impolo miova ny lalàmpanorenana, isaky ny miova ny mpitondra: atao mifanaraka amin’ny olona eo amin’ny mpitondra. Raha manao lalàmpanorenana, tsy maintsy miainga amin’ny kolontsain’ny maha Malagasy ny tena sy ny kolom-piarahamonina.
* Ahoana izany ny tokony handrafetana ny lalàmpanorenana?
– Ny tena hajain’ny Malagasy voalohany: ny lalàna, miainga amin’ny lalàmpanorenana. Faharoa, ny dina; fahatelo, ny fady. Tena atahorana sy hajainy toy ny anakandriamaso ny fady sy ny dina, satria voakasika ny zaza vao teraka mandra-pahalehibe. Tsy misy ambonin’ny dina fa ao anatiny avokoa: tsy misy sahy mandika. Satria ny mampihatra ny dina, ny fokonolona na ny mpiaramonina izay tsy azo ialana.
Raha tiana hohajain’ny Malagasy ny lalàmpanorenana, tsy atao hoe lalàmpanorenana ny anarany fa dinam-piarahamonim-pirenena. Raha vao mipetraka ny dina, tsy ilaina ny Haute cour de justice. Rehefa manao dina, andininy vitsivitsy ihany.
Maninona no tsy hiverenana ny kolontsaina maha Malagasy ny tena? Dingana hametrahana ny dinam-piarahamonim-pirenena izay. Enga anie ny tanora mba hahay hahafantatra ny tantaran’i Madagasikara, ny kolontsaina sy ny kolom-piarahamonina maha Malagasy. Raha mbola tsy eo izay fa maka tahaka befahatany ny any ivelany, aza manantena na inona na inona.